Ahụigodo ahụ maka ụlọ nrụpụta Mbadamba ụrọ | China Keyboard ikpe maka Tablet Manufacturers, Suppliers
Ebughibu Shockproof jupụtara na nkume Case ...
Soft TPU Back ikpe n'ihi ipad ...
Guzosie akpụkpọ anụ maka ipad ...
360 n'usoro Nrụgide oru Sho ...
Wuru na-touchpad ahụ keyboard ...
ikpe na keyboard Bluetooth nke mbughari maka Lenovo tab M10 Plus For Ipad for Samsung tablet
UGBU A, tebụl gị nwere ike ime ihe dị ka laptọọpụ, nwee ọ ofụ oge nke izu ike, nke na-agbanwe agbanwe na-enye ekele maka igodo sissor na ibe dị mma, yabụ aka gị agaghị ada mba. Isi njem nke 2 mm na-enye ezigbo omimi maka ọsọ na nkasi obi. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ na ụdị ọrụ raara onwe ya nye na ọtụtụ ụzọ mkpirisi igodo maka iOS, Android ma ọ bụ Windows na-ahapụ gị ka ijikwa mbadamba nkume ahụ na-ahapụghị keyboard. Ydị NA Osisi gị ma ọ bụ aka gị ma ọ bụ ụlọ ahịa ụlọ ahịa Naanị mepee ikpe ma malite ịpị. Mkpọchi gị bụ mkpọchi ...
Wuru na-touchpad keyboard ikpe maka ipad Air 4 pro 11 maka Samsung tab S7 S6 Lite
'GA-ACHY TOLỌ IHE A N'aka nke a, okwu ikpe a jikọtara nkenke trackpad na keyboard zuru oke maka iPad gị. Nkwado mmegharị aka zuru ezu na-agbanwe iPad gị ka ọ bụrụ igwe nrụpụta maka ịrụ ọrụ na mpempe akwụkwọ na akwụkwọ, ngwa ọrụ mmụta siri ike maka klaasị dịpụrụ adịpụ, na ndị ọzọ — ohere dịnụ enweghị njedebe. EGO KWESECR Work na-arụ ọrụ na trackpad nkenke na ngwa dị ka ndetu, ibe, nọmba tebụl na isi ihe. You'll ga-enwe ike ịpụta mkpụrụ ndụ spreadsheet, detuo okwu, ihe ...
Universal folio ikpe na mbughari Bluetooth kiiboodu maka 9.7-11 inch Apple, Andriod, Windows mbadamba
OMPATIABLE NA ỌT 9T 9 9.7- 11 INCH INTL 4-Point adịgide na-ejide ọtụtụ mbadamba 9.7-11 na ntukwasi obi ma mara mma gụnyere iPad, gam akporo na Windows. Universal Folio na-enwekwa ngwaọrụ dị iche iche iji kparịta ụka. UGBU A, tebụl gị nwere ike ime ihe dị ka laptọọpụ, nwee ọ ofụ oge nke izu ike, nke na-agbanwe agbanwe na-enye ekele maka igodo sissor na ibe dị mma, yabụ aka gị agaghị ada mba. Isi njem nke 2 mm na-enye ezigbo omimi maka ọsọ na nkasi obi. Ọrụ raara onwe ya nye na ụzọ mkpirisi maka iOS, Andr ...